Combine "Niva" SK-5: ireo toetra ara-teknika sy ny endriky ny asa - Foto-drafitr'asa - 2019
Izay ampiasaina dia ampiasaina
Cab sy ny mandeha
Fanovana lehibe momba ny combine
Ny "life" amin'ity fitaovana ity dia mifandray amin'ny orinasa Rostselmash. Tamin'ny faramparan'ireo taona 1950, dia nampiditra ny SK-3 ho an'ny mpanotrona ny injeniera ao an-toerana. Ho an'ny orinasa, dia nahavarimbona izany - talohan'izany, dia ny tarika madinika ihany no novokarina tao. Ny Troika dia nanana tahiry lehibe, izay nampiasain'ny mpamorona, izay "namoaka" modely SK-4 tamin'ny taona 1962. Tena nahomby tokoa izany, satria nanangona loka be dia be tany amin'ny fampiratiana isan-karazany.
Nahomby toy izany izy ireo ary natao ho fototra ho an'ireo "dimy". Ny fandrosoana sy ny fandehanana an-tongotra dia naharitra ela - ny voalohany SK-5s dia nivoaka tamin'ny taona 1970, ary nandritra ny 3 taona dia novolavolaina ny vokatra vaovao miaraka amin'ny efa mazàna.
Tamin'io fotoana io ihany koa no nanamarihana ny fandehanana voalohany - ny "prototype" dia efa vonona tamin'ny taona 1967.
Zava-dehibe izany! Ny famoronana dia manome fomba roa - tsy misy entana (2.5 ora) ary miasa (60 ora). Amin'ny voalohany dia manomboka ny alàlan'ny diplaoma, afaka avela hiasa mandritra ny antsasak'adiny. Miaraka amin'ny tsingerim-pivoarana goavana kokoa, dia mitombo tsikelikely hatramin'ny 75% ny entana, miaraka amin'ny fanaraha-maso sy fikojakojana araka ny fepetra ETO aorian'ny 10 ora.
Tsy very maina ny ezaka nataon'ireo injeniera - sarotra ny mahita olona tsy nahita an'io "veteran de la field" io. Niaritra fanavaozana maro izy, ary mbola misy foana ny kopia "vaovao". Nahazo aina ny kabine, nosoloina maitso ny lokon'ny mena, ary nanjavona ilay sary tamin'ny anarana, nosoloina ny teny hoe "effect". Saingy ny drafitra voaporofo dia mahomby toy izany.
Ny "sehatry ny asa" an'ity modely ity dia ny fanadiovana sy fanodinana voalohany ny serealy. Noho ny halehibiazina sy ny habetsaky ny havesatry ny combine, dia tsara ho an'ny fananganana sehatra midadasika na toe-javatra sarotra eo amin'ny tany sarotra.
Misy ihany koa ny dikan-teny momba ny tany malemy sy mando. Ity dia milina iray miaraka amin'ny fiara mandeha amin'ny semi-tracked, izay nohirain'ny zavamaniry. Ireo mpandraharaha matihanina manana fahagagana dia mahafantatra fa tsy misy ny "Nivas" mahazatra ao amin'ny saha "voafetra" - amin'ny toe-javatra toy izany dia hanome baiko izy ireo amin'ny fiaramanidina mahery vaika.
Mba hahatakarana ny manintona ny SK-5 Niva dia mifameno, diniho ny toetoetran'ny teknolojia amin'izao fotoana izao:
Môtô: dian-cylinder in-line diplaoma miaraka amin'ny tery ambony, four-stroke;
hery (hp): 155;
drum speed (rpm): 2900;
Isaky ny antsy: 64;
bunker volume (l): 3000;
Famoahana haingana (l / s): 40;
Fantatrao ve? Anisan'ireo fanovana ireo ary nisy fiara tena miavaka. Ny farafaharatsiny dia ny combine afaka manasaraka ny voatavo tampoka avy amin'ny pulp, noforonina tamin'ny taona 1970. Saingy ohatra iray monja izany.
Famoahana haavo (m): 2,6;
làlan-doha (m): 5;
Tontolon'ny mpitaingin-tsoavaly (m): 3.6, misy singa 4;
drame diameter (m): 0,6;
karazana fakantsary mitongilana: conveyor;
halava (m): 7.60;
width (m): 3.93;
avo (m): 4.1;
lanjany maina (t): 7.4.
Ny "Niva" maoderina manana marika diesel MMZ - D.260.1. Ity volavolan-tsolika 7.12 litatra ity dia tonga lafatra amin'ny asa isan-karazany.
Ny zava-marina dia manana torolàlana tsara (622 N / m) izy, izay manome fiofanana tsara na dia eo am-pelatanana tanteraka na rehefa mandalo fizarana sarotra. Ny "motera" dia mety ho "mihodinkodina" hatramin'ny 2100 rpm, saingy amin'ny fampiasana azy ireo dia miezaka ny "manararaotra" ny isa (1400 eo ho eo) izy ireo - amin'izao fotoana izao dia tonga ny tampon'ny fahefana.
Ny fanamafisana ny ranom-pako dia tsy maintsy ilaina amin'ny asa an-java-koditra, eo amin'ity lafiny ity, ny fiaramanidina diesel an'ny Minsk dia aleo kokoa amin'ny "rivotra".
Ho an'ny asa an-tery lava dia mila carteurs, traktera ary traktera kely ihany koa.
Ny lanjan'ity tarika ity dia 650 kilao. Avy amin'ireo tombony azo tsapain-tànana, dia misy ny asa sy ny fihenanam-po "mihelina". Ny fandaniana solika mandeha amin'ny pasipaotra ho an'ny Niva dia ny mpijinja izay fitaovana miaraka amin'ity motera ity dia 25 litatra isan'ora. Mety tsy mitovy amin'ny endriky ny asa atao sy ny fanitsiana ny fanitsiana ny solika io tarehimarika io.
Zava-dehibe izany! Raha ny fanombohana voalohany ny motera dia atao amin'ny hafanana eo ambanin'ny +5 ° C, dia tokony havaina amin'ny ririnina M8 ny ranom-boankazo ao amin'ny orinasa (mety amin'ny indices DM sy G2K).
Satria ny "fo" amin'ity milina ity dia afaka manatontosa motera toy izany koa:
SMD-17K sy SMD-18K (samy - 100 hp ny tsirairay);
120-mahery SMD 19K, 20K ary 21K.
Izy rehetra dia vita araka ny laharan-tariby mitaingina 4, saingy very izy ireo amin'ny MMZ "enina-lot" amin'ny resaka herinaratra sy ny fampiasana - dia kely kokoa.
Ity vondron-kozatra ity dia ahitana tetezana roa: ny familiana kodiarana ary ny làlana.
Mazava ho azy, ny voalohany dia sarotra kokoa amin'ny fanorenana. Izy io dia ahitana:
Ny fitaovam-piasan'ny Niva CK-5 malaza dia miara-miasa amin'ny fiaramanidina telo, miaraka amina sambo 3 sy andian-tsambony, ary 2 no misy azy ireo (toy ny fiaramanidina) ary mipetraka eo amin'ny fiara.
Ny "fandrobana" voalohany ny fitaovana voalohany, ary ny faharoa - ny haingana faharoa sy fahatelo. Aorian'ny famindrana ny fifindrana, ny milina "maimaim-poana" dia voasakana amin'ny rafitra manokana.
Eo amin'ny solaitraingan'ny fiarandalamby misy ny boaty dia apetaka ny kitrokelin'ny kofehy, raha toa kosa ilay mpamily miaraka amin'ny fanampian'ny lohataona 12 dia manindry azy amin'ny ilany anatiny. Raha esorina ny kitron-tsoavaly, dia mamoaka ilay disadisa ny entana ary manodina ny fihodinana mankany amin'ny transaxle.
Fantatrao ve? Ny mpamokarana Sovietika voalohany dia novokarina tamin'ny 1930 tany Zaporizhia. Araka ny fenitra anio, dia nomena anarana fiara ny fanahin'ny fotoana. - "Communard".
Ny familiana kodiarana dia mora kokoa:
trapezoid amin'ny sakana miaraka amin'ny cylinder hydraulic;
Ny famaky boribory dia mihazona eo amin'ny faran'ny boribory amin'ny alàlan'ny pivotsy sy ny tongotra. Ny Hubs dia mifamatotra amin'ny axes miaraka amin'ny fametahana taratra.
Amin'ny alàlan'ny fanovana rehetra dia ny fametrahana ny fiara klinoremenny. Raha tsorina, ny fotoana avy amin'ny motera dia mamindra amin'ny fehezan-tsoratry ny gidro, ary ny rafitra manontolo dia fehezin'ny variator.
Ity rafitra ity, izay manodina ny fiara manidina, dia manosika ny fehikibo eo amin'ny barila, ka manova ny sakan'ny stream. Ny fehikibony amin'ny fotoana iray ihany dia mandroso lalindalina kokoa na aseho amin'ny "sisiny" (avy eo mitombo ny diamondra). Ny fikarakarana ilay rafitra dia tarihin'ny valin'ny famindran-toerana mpamokatra hydraulic, ny entana izay entina ao anaty trano. Mba hanomezana haingana dia haingana, alefa ny lalana mankany aloha, ary hamerina haingana ny hafainganam-pandehany.
Amin'ny lafiny fampiononana, ny Niva dia manatratra ny fepetra maoderina. Noho ny fitaovana famolavolana vaovao dia lasa tsara kokoa ny fiarovan-tena, ary nanjary mora kokoa ny tafiditra ao anatiny - tamin'ny dikan-teny teo aloha, ny mpandrindra dia raha ny marina, tao anaty boaty vy vita amin'ny vy sy rivotra mahamay. Ao amin'ny fiara vaovao no misy ny fefiloha (ny marina, ho safidy).
Zava-dehibe izany! Rehefa mividy fitaovana ampiasaina, dia tandremo tsara ny toetry ny metaly (aorian'ny fijerena ny fototry ny voay rehetra etsy ambany), ny solika sy ny hydraulic rafitra. "Mametraka" antitra efa antitra ny marary - Voalohany indrindra, ny ravin-damba sy ny fantsona, ny vanja avy hatrany dia "hitsoka" azy ireo.
Mipetraka eo amin'ny toeram-piasana ny mpamily mahita azy eo anoloany:
Ny zana-tsipìkany dia fiarovana fiaramanidina, misaraka fisakafoanana sy fanesorana pedals;
eo amin'ny ilany havia ny kodiarana dia ny pedal pedal ary ny fiarovana ny fiara mijanona amin'ny fiara;
Eo ambanin'ilay kodiarana dia misy fitaovana entina manome solika, amin'ny dikan-teny samihafa dia mety misy eo amin'ny andaniny roa amin'ny "donut".
Ny seza mikitoantoana dia miovaova amin'ny fiaramanidina roa (horizontal sy vertical). Eo amin'ny ankavanana, eo an-joron'ny trano fiara, dia fitaovana fampitandremana misy setroka fampitandremana sy fanaraha-maso.
Misy fitaovana koa apetraka ao - indikativa amin'ny tsindry ny setroka sy ny rano, ny tachometer sy ny ammeter. Mety tsy ho izany - maro ireo tantsaha no mametraka ampinga vitsy.
Betsaka ny habaka dia mipetraka amin'ny biraon'ny rafitra miasa sy ny rafitra: drum, lohateny, "fanariana" ny bunker, sns.
Fantatrao ve? Ny sambon-tena voalohany noforonina tao amin'ny URSS dia C-4 (1947-1958). Mahaliana fa ny politika dia niditra an-tsehatra tao amin'ny "faratampony" - hatramin'ny taona 1956 dia nantsoina hoe "Stalinista" izy io, ary taorian'ny Kongresy Fahapotehana dia nampihena ilay anarana voalohany.
Ny familiana (familiana) dia mifototra amin'ny fanampian'ny hydraulics - tsy misy fifandraisana mahazatra eo anelanelan'ny kodiarana sy ny kodiarana, ny tsirairay dia mandray ny fitarihana sy ny rafitra fantsom-pamokarana, izay mamindra ny fluidin'ny orinasa entin'ny dipoavatra. Ity fomba fiasa ity dia mampihena ny fihenan-tsofina, saingy misy ihany koa ny olana. Noho izany, amin'ny fanitsiana tsy ara-dalàna ny kodiarana dia lasa "mafy".
Fantaro ny MT3-892, MT3-1221, Kirovets K-700, T-170, MT3-80, Vladimirets T-25, MT3 320, MT3 82 ary T-30 tractors izay azo ampiasaina amin'ny karazana asa samihafa .
Ireo fitaovana ireo dia manana rafitra hydraulic 2. Ny lehibe indrindra dia ny sampana miasa, ary ny fitantanana dia manamora ny fanaraha-maso.
Ny famolavolana ny laharana fototra dia ahitana:
pump type NSH-32U;
ny mpaninjara amin'ny fivoahana 7;
HZ variatora roa;
hydraulic cylinders amin'ny fananganana lohateny sy volkano.
Etsy ankilany, ny fizotran'ny familiana dia ahitana:
bins / bcvx
Samy mampiasa lasantsy avy amin'ny tanky 14 litatra ireo fitaovana ireo.
Hanampy anao koa ny mahafantatra tsara ny toetra mampiavaka ny Salyut 100, Neva MB 2, Zubr JR-Q12E moto-blocs.
Ho an'ny fampifandraisana "Niva" dia iray amin'ireo rafitra manan-danja indrindra izy io, izay tena manan-danja matetika ny mametraka azy amin'ny motera. Ny singa fototra sy ny ampahany dia:
Ny tranga izay ifehezan'ny fitaovana rehetra miasa. Ampifandraisina amin'ny fakantsary misy tsikombakomba amin'ny fampanginana azy sy ny fikotrokotroka. Io rafitra manontolo io dia voalanjalanja amin'ny loharano marevaka. Izy io dia mifatotra amin'ny fitaovana telescopic articopic miaraka amin'ny fidirana amin'ny antsy.
Zava-dehibe izany! Alohan'ny hitondrany ny vombony ho eny amin'ny làlam-pivoarana dia alefa ny bunker - Na dia fandefasana kely aza dia voarara.
Kitapo, manitsy ny haavon'ny tapa-kazo. "Extreme" dia natao ho 5 sy 18 cm, fa ny safidy afovoany dia 10 sy 13 cm.
Volotara, manitsakitsaka ny zozoro rehefa manapaka sy mitarika azy ireo any amin'ny goaika. Raha ny marina, dia sombin-tsoavaly misy tsipika matevina izy io, eo amin'ny vatany kely misy rantsana misy rantsana (tinainy). Izy ireo, an-kalamanjana, dia mipaka amin'ny lohataona.
Manapaka ny sisiny. Ao amin'ny bar iray dia misy rantsantanana tokana misy takelaka vita amin'ny rivotra izay mihodina amin'ny lalana samihafa. Ankoatr'izany, misy ihany koa ny fametahana ny rambony sy ny takelaka tetezana. Ny fihetsik'ireo antsy dia ampahany amin'ny "hinge - teleskaopy."
visy. Izy io dia milina cylinder miaraka amin'ny "disadisa" tapisaka amin'ny endriny - dia mandeha amin'ny làlana samihafa izy ireo, ary mandritra ny rotaka dia mamindra ny tselatra eo afovoany izy ireo. Any izy ireo dia raisina amin'ny rantsantanana iray manokana, izay mandefa an'io volavolan-dàlana io mankany amin'ny fonosana.
"Fiaramanidina". Vita amin'ny angadinomby izy io ary mitarika ny voa ho an'ny vovoka. Ireto misy sombin-kazo 2 miaraka amin'ny kintana eny amin'ny sisiny - mitondra sy mitondra. Ny rojom-bolo vita amin'ny raozy misy ravina vy dia "tompon'andraikitra" amin'ny fitaterana.
Haka. Manangona tsorakazo miondrika ary mandefa azy any amin'ny "ambany" amin'ny lohatenim-boky. Ny fametrahana azy dia tsy maintsy manala ny volofotsiny.
Ankoatra ny modely fototra, ny "solontenan'ny" fanovana hafa dia eo amin'ny hetsika. Maro tamin'izy ireo no efa nandritra ny 50 taona navotsotra, ka hifantoka amin'ny ankamaroan'ny olona isika. Izy ireo dia voatondro tsotra - ny taratasy sy ny dindika dizitaly dia ampiana amin'ny alalana "SK":
5A dia manondro motora 120 hp;
Fantatrao ve? Ny sasany amin'ireo tady "Niva" dia nandeha tamin'ny famokarana tsimokaretina fanadiovana voatabiha SKT-2. Tena tsara ho an'ny toeram-pambolena - raha teo amin'ny toeran'ny tsy fahampian-tsakafo, dia naverina tamin'ny "dimy" mahazatra ny ampahany avy amin'ny "voatabia", ary tsy manapaka ny famokarana.
Ny version 5AM dia manana milina maotera miisa 140, ary mihodina miankavia ny kamiao;
5M-1 dia mampitovy ny fifindran'ny hydrostatika;
Ny SCC-5 dia natao hiasa any amin'ny faritra sarotra sy "haka" tsikelikely hatramin'ny 30 °;
Ny SKP-5M-1 dia fanitsiana ny seminera ho an'ny tany "mando".
Nandritra ny fotoam-pandaharana nandritra ny fotoana rehetra, "Niv" dia nahitana traikefa goavana, ary ireo rehetra izay niasa tamin'ny fiompiana fambolena dia mahafantatra momba ny "natiora" amin'ireny fitaovana ireny.
Manana tombontsoa maro izy ireo:
Tsara fihenam-bidy amin'ny haben'ny kely;
famandrihana ny ampahany amin'ny ampahany sy ny fihazonana lehibe;
fanadiovana voa-karena azo ekena;
Tsara ny fahombiazana amin'ny famoizana vidy kely.
Misy ihany koa ny tsy fitovizan'ny toetra:
"fiaramanidina" manidina matetika;
fahasarotana amin'ny fametrahana ny lohan-doha sy ny zavatra; Mihoatra ny iray amin'ireo mpandrafitra "mpanamboatra" ny saha maro samihafa, ny fitohanana sy ny fonosana;
tsy dia malama mihazakazaka amin'ny entana feno.
Zava-dehibe izany! Maro no mitaraina momba ny olana momba ny "fihenjanana". Mety hitranga izany noho ny fihazonana ny valizy na ny fanitsiana tsy mety.
Na dia eo aza ireo tsy fahampiana ireo, ny SK-5 "tsara taloha" dia tsy mamoy ny tany. Ireo mpamboly vao manomboka mandray an-tsitrapo ny "ampiasaina" ary ny fampiasana hery sy fitaovam-piadiana sasany dia manararaotra azy ireo mandritra ny taona maro. Ny ankamaroan'ny ampahany dia manome antoka ny fiainana lava "Niva".
Ankehitriny fantatrao hoe inona no nahatonga izany rafitra lehibe izany ho malaza. Antenainay fa ity fampahalalana ity dia hanampy amin'ny famaritana ny safidin'ny teknolojia. Raketa matevina!
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Combine "Niva" SC-5: famerenana, ny toetra, ny fiantraikany ary ny fiantraikany